မီတာခတွေ အရမ်းကျလို့ တာဝန် ကျတဲ့ အထက်လူကြီးကို ဝင်တိုင် လိုက်သော အခါ – XB Media Myanmar
မီတာခ တလတလ၈သောင်း၉သောင်းကျော်လောက်ကျတယ် မီတာခအများကြီးကျလို့ air conသုံးတာတွေလျော့ ရေခဲသေတ္တာ ညပိုင်းပဲဖွင့်သုံး မီးကိုမလိုအပ်တာကိုမသုံးပဲချွေတာေ နလဲ၈သောင်းကျော်ဆောင်နေရလို့ မသင်္ကာတာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကမီတာမေ ဆာင်ခင်မီတာရုံး သွား ပြီး တာဝန်ကျနေတဲ့အထက်လူကြီးကိုဝင်တိုင်လိုက်တယ် သူတို့ကလာစစ်ေ ဆးပေးမယ် လို့ပြောလိုက်တယ်
ကိုယ့်ဘာသာစစ်ရအောင်လည်းdigitalမီတာပုံးက ဓါတ်တိုင်ပေါ်မှာ နောက်၃ရက်လောက် ကြာတော့စစ်ဆေးရေးဝန်ထမ်းနဲ့မီတာဖတ်တဲ့သူရောက်လာတယ် ဓါတ်တိုင်အောက်ေ ရာက်ေ တာ့ ကိုယ့်မီတာစာရွက်ကcode noနဲ့ digital စက်နဲ့ဓာတ်တိုင်အောက်ကလှမ်းဖတ်တယ် မီတာကိုဖတ်လိုက်တော့ ယူနစ်၂၀၀ကျော် ပိုကောက်ထားတာတွေ့ရတယ်
အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရတာလည်း ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ ကျွန်မတို့မသုံးပဲနဲ့တလတလ ယူ နစ်၂၀၀ကျော်ဖိုးသက်သက်ဆောင်နေရတာလား အဲ့လိုဆောင်နေရတာ ဘယ်လောက်ေ တာင် ကြာနေပြီလဲ အထက်ကိုရောက်အောင်တိုင်မယ်လဲပြောလိုက်ရော
မီတာဖတ်တဲ့ဝန်ထမ်းက ကျွန်တော်ယူနစ်ကိုလာမဖတ်ပဲမှန်းပြီးရေးလိုက်တာတဲ့ မှန်းကောက် မိတာပါတဲ့ အဲ့လိုလုပ်လို့ရလား နင်တို့မီတာရုံးကအဲ့လိုလုပ်စားနေတာလား နင်အဲ့လိုမှန်းေ ကာ က်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလည်းမေးတော့ဘာမှပြန်မပြောဘူး
ငါဘူမသိကိုးမသိနဲ့အဲ့လိုဆောင်နေရတာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲဆိုပြီး စိတ်တိုတိုနဲ့ေ အာ်ေ ငါက်လည်းပြောလိုက်ရော ပါလာတဲ့လူကြီးကသူအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါမယ်တဲ့ ခုတော့ ၈သောင်းကျော်ဆောင်ထားလိုက်ပါတဲ့ နောက်လကျရင်ပိုကောက်ထားတဲ့ ယူနစ်၂၀၀ေ ကျာ်ကို ၁၂၅ကျပ်နဲ့ပြန်တွက်ပြီးလျော့ကောက်ပေးပါ့မယ်လို့ပြောတယ်
မီတာရုံးကဝန်ထမ်းတွေ တလတလ မီတာလိုက်မဖတ်ပဲ အဲ့လိုရမ်းကောက်နေကြ တာ လား? ဒီလမီတာစာရွက်ရောက်တော့ မီတာခက ၅၃၅ကျပ်တဲ့ ၁ယူနစ်ပဲသုံးထားတယ်တဲ့ ဝန်ဆောင် ခက၅၀၀ကျပ်တဲ့
ငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးမှာ ဌာနဆိုင်ရာတွေက သူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်လွိုရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလား?
နေပြည်တော်ထိတက်တိုင်ချင်တာ ငွေကုန်လူပန်း အလုပ်တွေရှုပ်မှာစိုးလို့ စိတ်ကိုလျော့လိုက် ရတယ် #ဒီpostကိုတင်ချင်နေတာဒီလမီတာစာရွက်ရော က်အောင်၁လနီးပါးသည်း ခံစော င့်နေရလို့ခုမှတင်ရတယ် အဲ့လိုလိမ်စားချင်လို့ digitalမီတာပုံးကို ဓာတ်တိုင်ပေါ်တင်ထား တာနေမယ်။Ni Ni Khaing
မီတာခ တလတလ၈သောငျး၉သောငျးကြျောလောကျကတြယျ မီတာခအမြားကွီးကလြို့ air conသုံးတာတှလြေော့ ရခေဲသတ်ေတာ ညပိုငျးပဲဖှငျ့သုံး မီးကိုမလိုအပျတာကိုမသုံးပဲခြှတောေ နလဲ၈သောငျးကြျောဆောငျနရေလို့ မသင်ျကာတာနဲ့ပွီးခဲ့တဲ့လကမီတာမေ ဆာငျခငျမီတာရုံး သှား ပွီး တာဝနျကနြတေဲ့အထကျလူကွီးကိုဝငျတိုငျလိုကျတယျ သူတို့ကလာစဈေ ဆးပေး မယျ လို့ပွောလိုကျတယျ
ကိုယျ့ဘာသာစဈရအောငျလညျးdigitalမီတာပုံးက ဓါတျတိုငျပျေါမှာ နောကျ၃ရကျလော ကျ ကွာတော့စဈဆေးရေးဝနျထမျးနဲ့မီတာဖတျတဲ့သူရောကျလာတယျ ဓါတျတိုငျအောကျေ ရာကျေ တာ့ ကိုယျ့မီတာစာရှကျကcode noနဲ့ digital စကျနဲ့ဓာတျတိုငျအောကျကလှမျး ဖတျတယျ မီတာကိုဖတျလိုကျတော့ ယူနဈ၂၀၀ကြျော ပိုကောကျထားတာတှရေ့တယျ
အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့အဲ့လိုဖွဈရတာလညျး ဘာကွောငျ့ဖွဈတာလဲ ကြှနျမတို့မသုံးပဲနဲ့တလတလ ယူ နဈ၂၀၀ကြျောဖိုးသကျသကျဆောငျနရေတာလား အဲ့လိုဆောငျနရေတာ ဘယျလောကျေ တာငျ ကွာနပွေီလဲ အထကျကိုရောကျအောငျတိုငျမယျလဲပွောလိုကျရော
မီတာဖတျတဲ့ဝနျထမျးက ကြှနျတျောယူနဈကိုလာမဖတျပဲမှနျးပွီးရေးလိုကျတာတဲ့ မှနျးကောကျ မိတာပါတဲ့ အဲ့လိုလုပျလို့ရလား နငျတို့မီတာရုံးကအဲ့လိုလုပျစားနတောလား နငျအဲ့လိုမှနျးေ ကာ ကျနတောဘယျလောကျကွာပွီလညျးမေးတော့ဘာမှပွနျမပွောဘူး
ငါဘူမသိကိုးမသိနဲ့အဲ့လိုဆောငျနရေတာ ဘယျလောကျကွာနပွေီလဲဆိုပွီး စိတျတိုတိုနဲ့ေ အျာေ ငါကျလညျးပွောလိုကျရော ပါလာတဲ့လူကွီးကသူအဆငျပွအေောငျလုပျပေးပါမယျတဲ့ ခုတော့ ၈သောငျးကြျောဆောငျထားလိုကျပါတဲ့ နောကျလကရြငျပိုကောကျထားတဲ့ ယူနဈ၂၀၀ေ ကျြာကို ၁၂၅ကပျြနဲ့ပွနျတှကျပွီးလြော့ကောကျပေးပါ့မယျလို့ပွောတယျ
မီတာရုံးကဝနျထမျးတှေ တလတလ မီတာလိုကျမဖတျပဲ အဲ့လိုရမျးကောကျနကွေ တာ လား? ဒီလမီတာစာရှကျရောကျတော့ မီတာခက ၅၃၅ကပျြတဲ့ ၁ယူနဈပဲသုံးထားတယျတဲ့ ဝနျဆောငျ ခက၅၀၀ကပျြတဲ့
ငါတို့တိုငျးပွညျကွီးမှာဌာနဆိုငျရာတှကေသူတို့လုပျခငျြတာလုပျလှိုရတ ယျဆိုတဲ့သဘော လား?
နပွေညျတျောထိတကျတိုငျခငျြတာ ငှကေုနျလူပနျး အလုပျတှရှေုပျမှာစိုးလို့ စိတျကိုလြော့ လိုကျ ရတယျ #ဒီpostကိုတငျခငျြနတောဒီလမီတာစာရှကျရော ကျအောငျ၁လနီးပါးသညျး ခံစော ငျ့နရေလို့ခုမှတငျရတယျ အဲ့လိုလိမျစားခငျြလို့ digitalမီတာပုံးကို ဓာတျတိုငျပျေါတငျ ထား တာနမေယျ။Ni Ni Khaing
ဘာသာရေးနဲ့ပတျသတျပွီးအယူအဆ လှဲမှားနသေူတှကေို ခဈြတဲ့စိတျနဲ့ပွု ပွငျပေး ခဲ့တဲ့ အိမျ့ခဈြ